Qiyaas hore ganacsiga Race 3 7 Crore ilaa 10 Crore ayaa ka lumi doonto haddii Ciida Jimco noqonin – Filimside.net
Qiyaas hore ganacsiga Race 3 7 Crore ilaa 10 Crore ayaa ka lumi doonto haddii Ciida Jimco noqonin
June 12, 2018 Zakarie Abdi
Taariikhda: June 12, 2018
Ka hadalka iyo tirinta maal maha ka harsan daawashada filimka weyn Race 3 waa mid cirka sii galeyso waxaana filimkan tiyaatarada la saari doonaa Jimcadaan 15 June 2018.
Race 3 waxaa hogaamiyaal ka ah Salman Khan, Jacqueline Fernandez, Anil Kapoor, Bobby Deol, Daisy Shah iyo Saqib Saleem.
Hindiya waxay u badan tahay inay Ciidi doonaan Sabtiga ama 16-ka June inta badana Hindiya hal maalin ayay ka dambeeyaan Sacuudiga sidaa darteed haddii Sacuudiga Jimco laga ciido Hindiya sabti ayay ciidi doonaan.
Tani waxay ka dhigan tahay Race 3 in maalintiisa kowaad gudaha Hindiya laga daawanayo aysan ciid noqon doonin taasi oo ganacsigiia 7 Crore ilaa10 Crore ka lumin doonto.
Race 3 haddii maalintiisa kowaad Jimcada Ciida gudaha Hindiya ugu soo beegmi laheyd hubaal ahaan wuxuu keeni karaa 40 Crore ilaa 50 Crore ganacsi u dhaxeeyo madaama hadal heyntiisa waali ay tahay.
Balse haatan shabakada Bollywood Hungama waxay sadaalineysaa in Race 3 maalintiisa kowaad keeni doono 32 Crore ilaa 34 Crore ganacsi u dhaxeeyo madaama Jimcada Hindiya laga soomi doono.
Bollywood Hungama waxay qabtaa aragti ahaan in Race 3 maal maha sabti (Ciid) iyo axad (maalin shaqada laga nasanaayo) uu keeni doono min 40 Crore ka badan.
Bollywood Hungama waxay sadaalinee sedexda maalmood ee ugu horeyso Race 3 keeni doono 110 Crore ilaa 115 Crore kuna xeen daaban awooda Mega Star Salman Khan.
Kadibna filimkan halka uu hiigsan doono waxay ku xirnaan doontaa sheekadiisa ama fariintiisa sida loo soo dhaweeyo laga bilaabo Isniinta ama maalintiisa afaraad ganacsigiisa filimkan weyn.
Race 3 waa filim Hindiya oo dhan ka gadmi doono min tuulo ilaa magaalo waxaana ugu dambeesay filim fariintiisa baahsan oo la daawado bishii Maarso dhamaadkeedii markaas oo uu Baaghi 2 tiyaatarada gil gilay.
Sidaa darteed Mega Star Salman Khan wuxuu la imaan doonaa filim Action dhameestiran ah oo gobol walbo Hindiya ka gadmi karo iyo xiligiisa feestada taasi oo sababi karto wax walbo inuu Race 3 Boxoffice-ka ka sameeyo.
Waxaa Aqrisay 833